१८ वर्षमै बिवाह गरेकी टिकटक स्टार स्मारिकाले किन गरिन् डिभोर्स ? – Jagaran Nepal
१८ वर्षमै बिवाह गरेकी टिकटक स्टार स्मारिकाले किन गरिन् डिभोर्स ?
नेपाली चर्चित टिकटक स्टार स्मारिक ढकाल र उनका पति विवेक अधिकारीबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। झापाको बुधबारे घर भएका स्मारिका र विवेकबीच डिभोर्स भएको कुरा यसअघि नै हल्ला चलिरहेको थियो तर पछिल्लो समय भने विवेक स्वयंमले टिकटमा लाइभ आएर यसको पुष्टि गरे।
उनीहरुबीच समझदारीमा छुट्टिने सहमति भएको विवेकले बताएका छन। टिकटकमा स्मारिका र समारिकाको जुम्ल्याहा जोडी अत्यधिक रुचाइएका जोडी हुन। स्मारिका दिदी र समारिका बहिनी हुन्। समारिकाको भने बिहे भएको छैन। डिभोर्सको भित्री कारण भने दुबैले खुलाइएका छैनन् ।
पछिल्लो समय उनी म्युजिक भिडियो, सर्ट मुभिहरुमा पनि अभिनय गर्दै आएकी छन। स्मारिकाले विवेकसँग १८ बर्षकै उमेरमा विहे गरेकी थिइन्। उनीहरुका सन्तान भने छैनन् । एकै ठाँउमा घर भएका उनीहरूको प्रेम तथा मागी बिवाह भएको हो ।